१३ सय कम्पनीमा सुचिकृत २३७ मात्र ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
१३ सय कम्पनीमा सुचिकृत २३७ मात्र ?
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एक हजार दुई सय ६९ कम्पनी पब्लिक लिमिटेडको रुपमा दर्ता छन्, यसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा दुई सय ३७ कम्पनी सुचीकृत छन् ।
किन बजार बाहिरै छन् केही बीमा कम्पनी ?
मेट एलिको, लाइफ इन्स्योरेन्स र ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका छैनन्। कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १२ ले बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरु पनि पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।तर यी दुवै कम्पनी नेपालमा कम्पनीको रुपमा भन्दा पनि शाखाको रुपमा स्थापना भएका हुन्। शाखाको रुपमा रहेकैले यी कम्पनीले नियम अनुसार पब्लिक कम्पनीमा जानु पर्ने हुदैन भने सेयर जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुदैन।हुनतः ५० बर्ष अघिदेखि नेपालमा व्यवसाय गरिरहेको ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले बीमा क्षेत्रको नियमन शुरु भएदेखि नाफा आफ्नो देश (भारत) मा नलगेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर पनि लगभग एक हजार ३२ कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेका छैनन्। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुने वित्तिकै प्रथमिक सेयर निष्कासन गर्न अनिवार्य छैन, तर कम्पनीले भविस्यमा थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ भनेर कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडका रुपमा दर्ता गराएका हुन्छन्। कम्पनी ऐन अन्तर्गत यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने भनेर निश्चित प्रतिशत छुट्याएका पनि हुन्छन्। ‘सेयर छुट्याए पनि दिनै पर्छ भन्ने अनिवार्य नभएका कारण सबैले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्दैनन्,’ धितोपत्र बोर्डका कानुन बिभाग प्रमूख मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने। यस्ता कम्पनीले जारी पुँजी वृद्धि गरेर नै पूँजी थप्दै लैजान्छन्। बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन उनीहरुलाई आय करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। आर्थिक ऐन २०६७ अनुसार धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने कम्पनीहरुलाई लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था छ ।
राम्रा कम्पनी नै आउँदैनन्
निजी क्षेत्रको प्राइभेट कम्पनीहरु त पब्लिक हुन चाहँदैनन् नै पब्लिक लिमिटेडकै रुपमा स्थापना भएका कम्पनीहरु पनि सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्नु पर्छ भन्नेमा छैनन्। उत्पादनमुलक कम्पनीहरु मध्ये हुलास वायर इडष्ट्रिज लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, बालाजु सिमेन्ट, हिमालयन बु्रअरी लिमिटेड, चितवन मिल्क लिमिटेड, नेपाल कोयल लिमिटेड, मङमलुङ टि स्टेट, बिभिन्न जलविद्युत् कम्पनीहरु राम्रोसँग सञ्चालनमा छन्। यस्ता कम्पनीले सेयर जारी गरेमा प्रिमियमै पनि बिक्री हुन सक्छ। तर पब्लिक कम्पनीकै रुपमा दर्ता भएर पनि बजारमा आउन आकर्षित देखिँदैनन्।चितवन मिल्क लिमिटेड ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थिर सम्पत्ती भएको कम्पनी हो। कम्पनीमा दुग्ध बिकास संस्थानको ११ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। बिसं २०५१ मा स्थापना भएको मङमलुङ टि स्टेट कम्पनी त्यति खेर नै छ लाख डलर लगानी गरेर सञ्चालनमा आएको कम्पनी हो। नेपालको एक प्रमूख व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेशनले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो, हुलास वायर इडष्ट्रिज लिमिटेड। राम्रो व्यवसाय गरिरहेका यस्ता कतिपय कम्पनीको प्राथमिक निष्कासनमा आउने सोच नै छैन।केही पब्लिक कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डसँग एकाध पटक सेयर निष्कासनको छलफल समेत गरेका थिए। त्यसैमध्येको एक काठमाण्डु मेडिकल कलेजले वोर्डसँग छलफल गरेको थियो। १० बर्षदेखि कम्पनीले कायम सेयर लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्दै आएको कम्पनी सचिव अच्युत जोशी बताउँछन।नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्राथमिक निष्कासनको लागि छलफल समेत गर्न पुगेको कम्पनीले पछिल्लो समय भने यो प्रक्रिया न त रोकेको छ न अगाडी बढाएको छ। हाल यसमा कुनै प्रगती नभएको जोशीले बताए।व्यवसाय बिस्तार गर्न र आफ्नो व्यवसायको ‘भ्यालु क्रिएट’ गर्न यस्ता कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्ने हो। ‘तर त्यस्तो सोचको बिकास नै कम्पनीहरुमा भएको देखिदैन,’ सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन।सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन, व्यवासाय सम्बन्धि गतिविधि बढाउन , लगानी भित्र्याउन पनि अन्य कम्पनीहरुको तुलनामा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुलाई सजिलो हुन्छ।
किन जाँदैनन् सर्वसाधारणमा ?
व्यवसायीहरुले बैंकहरुबाट महँगो व्याजदरमा कर्जा लिएर व्यावसाय बिस्तार गर्ने पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर सर्वसारधाणमा सेयर जारी गरेर बिना व्याज पाइने पुँजी प्रयोग गर्न भने कम्पनीहरु तयार देखिँदैनन्। पारदर्शीता अभाव भएका, मुनाफा बाँड्ने सोच नभएका, आफुलाई व्यवसाय विस्तार गर्न पूँजी आवश्यक नभएका कम्पनीहरु सेयर निष्कासनमा उत्सुक नभएका देखिन्छन्। सर्वसाधारण सेयर धनिहरुबाट कम्पनीको निर्णयमा हुन सक्ने बिमती, साधारण सभा लगायतमा हुन सक्ने प्रतिरोध, बहुमत र अल्पमतको खेल लगायतको झमेलामा पर्न सक्ने भन्दै यस्ता कम्पनीहरु सर्वसाधारणमा जाने झन्झट नगरेका हुन्। बिभिन्न समयमा यस्ता कम्पनीहरुलाई आउन आग्रह गर्दै नियमक निकाय, बजारका सरोकार नियका लगायतले केही कार्यक्रमहरु, छलफल पनि लगायतले गर्ने गरेका थिए, तर उपलब्धि भने शुन्य नै भएको छ। सेयर लगानीकर्तालाई यस्ता विविध क्षेत्रका कम्पनीहरु बजारमा आउने हो भने लगानी विविधीकरण गर्ने अवसर मिल्दछ। अहिले केही सिमित क्षेत्र मात्र बजारमा भएकोले पनि लगानीकर्ताहरुले चाहेर वा नचाहेर त्यही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु परिरहेको छ। सवै क्षेत्रका कम्पनीहरु सर्वसाधारणमा आउँदा सेयर बजारको दायरा पनि फराकिलो हुन्छ। विगतमा पनि केही उत्पादक मुलक कम्पनीहरु बजारमा नआएका होइनन। १८ कम्पनी अहिले पनि सुचीकृत नै छन्। तर चार कम्पनीको मात्र समयसमयमा कारोबार हुन्छ। यो समूहका पाँच कम्पनीहरुले मात्र आफ्ना लगानीकर्ता सम्बोधन गरिरहेको भेटिन्छ बाँकी कम्पनीको अस्तित्व अज्ञात छ।